Alaabooyinka Baakadaha Shandong Hengrong Co., Ltd. waa shirkad baaxad weyn oo isku-darka wax-soo-saarka, horumarinta iyo suuq-geynta oo ku takhasustay soo-saarka alaabooyinka waaweyn sida boorsooyinka FIBC, bac-xidhka, bacaha Bopp, bacaha mesh, bacaha-suufka ah iyo gogosha haramaha oo si weyn loogu isticmaalo warshadaha, macdanta & beeraha warshadaha, baakadaha wax soo saarka, gaadiidka, bakhaarka iyo saadka.
Shirkadeena ayaa soo bandhigtay qalabka iyo farsamooyinka casriga ah ee gudaha iyo dibaddaba waxaana alaabta oo dhan laga sameeyaa 100% qalabka bikrada ah. Makiinadahayaga sawir -gacmeedka siligga waxay soo saari karaan fiilooyin midabyo kala duwan leh oo dhumuc weyn leh oo leh awood sare, hanti ballaarineed oo aad u fiican, UV aad u fiican iyo iska -caabbinta oksaydhka, oo dabooli karta baahida macaamiisha ee adeegsiga soo noqnoqda.
Mashiinnada wax-soo-saarka waxay soo saari karaan 25-500cm oo ah dhar-tollan oo ballaaran oo leh dusha sare, dhalaalka sare, xoogga gilgilashada sare iyo nolosha adeegga dheer, taas oo si weyn u yareyn karta kharashaadka saadka iyo shaqada ee macaamiisha. Ku hubaysan farsamooyin horumarsan, mashiinnada dahaarka waxay soo saari karaan dhar dahaarka leh oo xoog leh oo waara, oo leh nolol adeeg dheer iyo boodh wanaagsan/saamayn caddayn qoyan. Ku hubaysan farsamooyin aad u fiican, mashiinnada tolidda ayaa soo saari kara nooca tubbada FIBC, U nooca FIBC, bacaha isku -buuqa, bacaha hawo -mareenka ah, iyo bacaha qaabka aan caadiga ahayn, bacaha leno mesh, kuwaas oo dhammaantood lagu gartaa naqshad macquul ah, muuqaal soo jiidasho leh iyo waxqabad aad u sarreeya. Iyada oo awood u leh hirgelinta wax -soo -saarka baaxadda leh, shirkadeena ayaa si dhakhso leh u gaarsiin karta badeecado ku saleysan isku -xirnaanta dhow ee u dhexeeya habsocodka laga soo bilaabo dalabka si loo gaarsiiyo.
Waxaan samaynay nidaam maareyn tayo oo dhammaystiran kaas oo ay tahay in si adag loo ilaaliyo tayada iyo tijaabinta hab kasta oo loogu talagalay dhammaan badeecadaha laga soo bilaabo gelitaanka agabyada illaa soo -dhoofinta alaabada la dhammeeyay, iyo 100% alaabooyinka dhammaaday waa in la tijaabiyaa lana nadiifiyaa si loo hubiyo muuqaal nadiif ah oo hagaagsan.
Iyada oo leh koox naqshadeysan oo xirfad leh, waxaan ku siin karnaa xirmo wax ku ool ah oo kala duwan iyo xalal daabacan oo waafaqsan baahiyaha kala duwan ee macmiilka, waxaanan u bixinnay in ka badan 1,000 nooc oo naqshado ah macaamiisheena ka yimid Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Australia, Yurub iyo Aasiya. Si fiican loo qaabeeyey oo si heer sare ah loo soo saaray, alaabtayada ayaa si weyn hoos ugu dhigtay qiimaha wax iibsiga ee macaamiisheena, waxaana si weyn u amaanay macaamiisheena adduunka oo dhan.
Iyada oo leh qaabab ganacsi oo dabacsan oo kaladuwan, shirkadeenu waxay bixin kartaa adeegyada ODM iyo OEM. Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhaweynaynaa macaamiishii hore iyo kuwa cusub ee adduunka oo dhan shirkadeena gorgortan ganacsi iyo iskaashi. Sidoo kale, waxaan ku dadaali doonnaa inaan siinno mid kasta oo ka mid ah macaamiisheena alaabo iyo adeegyo tayo sare leh!